Soo dejisan Tumblr 3.8.4.2 – Vessoft
Soo dejisan Tumblr
Tumblr – software ah ee maamulka content ee adeegga microblogging caan ah. Software waxuu nalugu blogs of users kale, ay daabacaan maqaallo kala duwan oo videos, sarrifka ee fariimaha, qiimeeyo tiirarkeedii iyo qabtaan qaababka kale ee bulshada. Tumblr ku jira a search engine habboon iyo bixiyaa xulashada ah ee articles kala duwan oo ka mid ah dadka qora websiteyada ugu fiican adduunka. Software wuxuu kala qaybiyaa waxyaabaha la daabacay on qaybaha sida chat, video, photos, xigashooyin, links iyo qoraalka. Tumblr ayaa sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la isticmaala shabakadaha bulshada kala duwan wadaagaan blogs iyo qalab kale.
Publications of content kala duwan
Maareynta blogs badan
Kala of qalabka oo qaybo kala duwan
The search engine haboon
Taageerada hawlaha network bulshada
Tumblr Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... WhatsApp Messenger 2.12.250
العربية, English, Français, Español... Twitter 5.81.0
العربية, English, Українська, Français... Periscope 1.3.4
English, Українська, Deutsch, Русский... SoundCloud 15.09.21
العربية, English, Українська, Français... Google+ 6.6.0.1058
العربية, English, Українська, Français... Dropbox 7.2.8
العربية, English, Українська, Français... Download Manager 1.1.4